The injustice will come banging at your door if you ignore it!
English • Jun 6, 2021
"The injustice will come banging at your door if you ignore it!”
On today (5th of June), TTAJ did pamphlet and pocket sharing activity at Matsuda Station, Tokyo.
We were able to hand out 800 pamphlets and 800 pocket tissues from 3:00pm till 6:00 pm.
We would also like to express our deepest gratitude to today donors of water and refreshments (Linka Lay Family and A Lin Eain Sar Pay).
တစ်ချိန်မှာ အဲ့ဒီမတရားမှုက ကိုယ့်အိမ်တံခါးဝကိုလာခေါက်ပါလိမ့်မယ်။"
[English & Japanese Version as below]
ယနေ့ ၆ လပိုင်း ၅ ရက်နေ့မှာ TTAJ အဖွဲ့အနေနှင့် Pamphlets / Pocket Tissue ဝေတဲ့ လှုပ်ရှားမှုကို တိုကျို ၊ မာချိဒ ဘူတာမှာ ပြုလုပ်ခဲ့ကြပါတယ် ။
ညနေ ၃ နာရီမှ ၆ နာရီအတွင်း
လက်ကမ်းစာစောင်ပေါင်း ၈၀၀ နှင့် တစ်ရှူး အခုရေ ၈၀၀ ကို ဂျပန်ပြည်သူ/သားတွေ လက်ဝယ်အရောက် ဝေငှပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ယခုတစ်ပတ် Volunteers များအတွက် ရေသန့်ဘူးများ၊ အားဖြည့်အချိုရည်များ လှူဒါန်းပေးပါသော လင်္ကာလေးတို့မိသားစု နှင့် အလင်းအိမ်စာပေ မိသားစုကိုလည်း ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်🙏
ဒီနှစ်နွေဦးဟာ အောင်ပွဲနဲ့ပဲ အဆုံးသတ်ရမယ်💪🏻💪🏻